'सिलिपिङ टयाबलेट' खाएर अस्पतालमै सुतेका शशांकलाई विहान हेर्दा अचेत ! | | Nepali Health
‘सिलिपिङ टयाबलेट’ खाएर अस्पतालमै सुतेका शशांकलाई विहान हेर्दा अचेत !
२०७३ असार २३ गते ८:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ २३ असार – मंगलबार बेलुका ८ बजे ओम अस्पताल पुग्दा कांग्रेस महामन्त्री डा. सशांक कोइराला सामान्य अवस्थामै थिए । सँगै रहेका सहयोगी भरत तिवारीका अनुसार पेटमा खराबी भएका कारण अस्पताल लगिएको थियो । उनी बस्ने टोखाबाट अस्पताल आउन करिब ४० मिनेट लाग्छ । सवा ७ बजेतिरै शशांक निवासबाट निस्किएका थिए । चिकित्सकले सामान्य चेकअप गरी भर्ना गरे ।
‘अस्पताल आउँदा केही भएजस्तो थिएन, सामान्य अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो । पेटको सामान्य खराबी भएर ल्याइएको थियो । बुधबार विस्तृत जाँच गरेर टोखा फर्कने योजना बनाएका थियौं,’ तिवारीले भने, ‘सामान्य अवस्थामा भएकैले चिकित्सकले बेलुका विस्तृत जाँच नगरी भोलिपल्ट बिहान गर्ने योजना बनाएका थिए ।’
राति किन अस्पतालबाट केयर गरिएन भन्ने प्रश्न नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका छन् । जवाफ अस्पतालले समेत दिन सकेको छैन । कोइरालाको अवस्था गम्भीर भएर भेन्टिलेटरमा राखिएपछि मात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूलाई खबर गरिएको थियो ।
लगत्तै नेताहरू अस्पताल पुगेका थिए । सभापति देउवाले तत्काल भारत लैजाने तयारी गर्न अस्पतालसँग आग्रह गरे । उनले भारतका केही चिकित्सकसँग फोनमार्फत सल्लाह पनि गरे । अस्पतालका प्रवक्ता लव जोशीले अस्पतालबाट विमानस्थलसम्म समेत लैजाने अवस्था नरहेको सञ्चारकर्मीसँग बताएका थिए ।
‘यहाँबाट विमानस्थल र दिल्ली विमानस्थलबाट अस्पतालसम्म लैजान सकिने अवस्था भयो भने एयर एम्बुलेन्सबाट लैजान सकिन्छ, यो विकल्पलाई हामीले खुला राखेका छौं,’ उनले भने । जोशीका अनुसार कोइराला–पत्नी डा. सुपात्राले भारतमा हुनेजस्तै उपचार पद्धति भएकाले ओममै राखेर उपचार गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । – आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
शशाङ्कको स्वास्थ्य अवस्था : आँखा खोले, इसाराले बोले तर अझै ढुक्क छैनन् चिकित्सक !
जिल्लामै एउटा एक्सरे मेसिन त्यै पनि प्राविधिक नभएर बन्द